Umatshini wokuPakisha we-Thermoforming, Umatshini wokuPakisha uVavanyo-iPakethe yeUtien
I-Utien Pack Co, Ltd. eyaziwa ngokuba yi-Utien Pack lishishini lobuchwephesha elijolise ekuphuhliseni umgca wokupakisha ozenzekelayo. Iimveliso zethu eziphambili zangoku zigubungela iimveliso ezininzi kumashishini ahlukeneyo njengokutya, i-chemistry, i-elektroniki, amayeza kunye neekhemikhali zekhaya. I-Utien Pack yasekwa ngo-1994 kwaye yaba luphawu olwaziwayo ngophuhliso lweminyaka engama-20. Sithathe inxaxheba kuyilo lwemigangatho yesi-4 yelizwe yomatshini wokupakisha. Ukongeza, siphumelele ngaphezulu kweetekhnoloji ze-patent ze-40.emveliso zethu ziveliswa phantsi kwe-ISO9001: 2008 Sakha oomatshini bokupakisha abakumgangatho ophezulu kwaye senza ubomi obungcono kumntu wonke sisebenzisa itekhnoloji yokupakisha ekhuselekileyo. Sinikezela ngezisombululo zokwenza iphakheji engcono kunye nekamva elingcono.
Ngaphezulu kweminyaka engama-25 yamava
Ngaphezulu kwama-40 ePatent Technologies
Oomatshini be-Thermoforming, kwiimveliso ezahlukeneyo, banokukhetha ukwenza oomatshini bebhanyabhanya abomeleleyo nge-MAP (Modified Atmosphere Packaging), oomatshini befilimu abaguquguqukayo abanomshini okanye ngamanye amaxesha iMAP, okanye iVSP (Ukupakisha uLusu lokuPakisha).
Abatyali betreyi abavelisa ukupakishwa kwe-MAP okanye ukupakishwa kwe-VSP kwiitreyi ezenziwe kwangaphambili ezinokupakisha ukutya okutsha, okukhenkcezisiweyo, okanye imveliso yokutya efriziwe kumanqanaba emveliso.
Oomatshini bokuphuma lolona hlobo luxhaphakileyo loomatshini bokupakisha bokutya kunye nokuphathwa kwezicelo zamachiza. Ukupakisha oomatshini kususa ioksijini yomoya kwiphakheji kwaye kutywinwe iphakheji.
Ultrasonic Itywina leTyhubhu
Eyahlukileyo kwisitywina sokushisa, ityhubhu ye-ultrasonic itywina isebenzisa itekhnoloji ye-ultrasonic ukwenza ukuba iimolekyuli kumphezulu weetyhubhu zidityaniswe ngokudibene kwe-ultrasonic. Ukudibanisa ukulayishwa kwetyhubhu ezenzekelayo, ukulungisa indawo, ukuzalisa, ukutywina kunye nokusika.
Ngoxinzelelo olomeleleyo, umatshini wokupakisha weCompress ucofe uninzi lomoya engxoweni emva koko uyitywine. Isetyenziswe ngokubanzi ukupakisha iimveliso ze-pluffy, njengoko kuluncedo ukunciphisa indawo engama-50%.
Lo matshini usekwe kwitekhnoloji yokutywina ubushushu. Ibhanti ye-PVC iya kufudunyezwa macala omabini kwaye idityaniswe kunye phantsi koxinzelelo oluphezulu. Ukutywina kuqondile kwaye kugudile.
Ukupakishwa kweziqhamo ezomileyo
UMAXWELL, umzi-mveliso weqonga owenza iziqhamo ezomisiweyo ezifana ne-almond, ierasentyisi kunye nejuzi emisiweyo e-Australia. Siqulunqe umgca wokupakisha ogqityiweyo ukusuka kwiphakheji yokujikeleza, ubungakanani bemoto, ukuzalisa ngokuzenzekelayo, ukucoca kunye nokugungxula ngegesi, ukusika, ukuthoba iimoto kunye neelebheli ezizenzekelayo. Kwakhona t ...
Ukupakishwa kwesonka saseCanada
Umatshini wokupakisha womenzi wesonka waseCanada ungaphezulu kwe-700mm ububanzi kunye ne-500mm kwangaphambili ekubumbeni. Ubungakanani obukhulu bubeka isicelo esiphakamileyo kumatshini wokunyusa umzimba kunye nokuzalisa. Kufuneka siqiniseke nokuba uxinzelelo kunye namandla okushushu okuzinzileyo ukufezekisa ipac ...